बिश्व Archives - Page3of 13 - बिगुल न्यूज
माघ २१, २०७४ DPN G
पाकिस्तानमा फेसन शो सामान्यतया: खुला ठाउँमा आयोजना गर्न रोक लगाइएको छ। यसका लागि त्यहाँ फेसन स्टुडियोहरु छन्, विशेष रुपमा डिजाइन गरिएको ठाउँहरु छन्। तपाई भन्न सक्नुहुन्छ कि फेसन शोको आयोजना …
अमेरिका र दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिबीच फोनवार्ता, चर्चा यस विषयको
माघ २०, २०७४ DPN G
वासिङ्टन, २० माघ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जाय इनबीच शनिबार बिहान फोनवार्ता भएको समाचार छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा …
कारबाहीमा २५ आतङ्ककारी मारिए
मैमान, अफगानिस्तान, २० माघ । अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्त फर्याबमा तालिवानको अखाडालाई लक्ष्य गरी सरकारी बल गरेको कारबाहीमा परी कम्तीमा २५ आतङ्ककारी मारिएका छन् । गत २४ घण्टायता यो कारबाही जारी रहेको …
क्यूबाको पूर्व राष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रोको छोराले गरे आत्महत्या, यस्तो थियो कारण !
माघ १९, २०७४ Madhu Sudan
काठमाडौँ:- क्यूबाको पूर्व राष्ट्रपति र नेता रहेको दिवंगत फिडेल क्यास्ट्रोको जेठो छोरा फिडेल एन्जल क्यास्ट्रो डियाज-बलार्टले मंगलबार आत्महत्या गरेका छन् । उनी स्थानीय समय अनुसार बिहीबार बिहान मृत भेटिएका हुन् …
निर्वाचन अायाेगले निकाल्याे २ हजार मतदाताका लागी १२ हजार मतपत्र
माघ १९, २०७४ Asinam Telar
काठमाडाै । निर्वाचन अायाेगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका मतपत्र छापिसकेको जनाएको छ। २ हजार ५६ जना मतदाता रहेकाे राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा अायाेगले १२ हजार मतपत्र छापेकाे हाे । केही दिन पहिले अायोगले निर्वाचनको लागि आठ …
माघ १८, २०७४ DB - Bigul Media
पोखरा । प्रदेश सरकार (प्रदेश नं ४)का प्रमुख सचिव लक्ष्मण अर्यालले आज पद बहाली गरेका छन् । प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रमबीच अर्यालले पद बहाली गरेका …
यी फोटोहरुमा हेर्नुस् विश्वभर कस्तो देखियो सुपरमून
माघ १८, २०७४ DPN G
३१ जनवरी अर्थात हिजो बुधबार सुपरमून देखिएको छ। सुपर मून हुने दिन चन्द्रमा सामान्यतया आकारबाट १४ प्रतिशत ठुलो र ३० प्रतिशत अधिक चमकदार देखिनेछ । एकै महिनामा जब दोस्रोपटक चन्द्रमा उदय …
ट्रम्पसँगको सम्बन्धबारे पोर्नस्टारले गरे नयाँ आश्चर्यजनक खुलासा
काठमाडौँ:- विगतका दिनहरुमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र पोर्नस्टार स्टोर्मी डेनियल्स बीच २००६ मा कथित यौन सम्बन्ध भएको बारे खबर जताततै आईरहेको छ। पोर्नस्टार स्टोर्मी डेनियल्स स्वयंले दाबी गरिन कि जब …
माघ १८, २०७४ Madhu Sudan
काठमाडौँ:- संसार रहस्यमयले भरिएको छ भने जस्तै स्पेनकी ३० वर्षीय एक महिलालाई दुनियाँमा जहाँ पनि आउँन लागेको भूकम्पको बारेमा सबैभन्दा पहिले जानकारी हुनेगर्दछ । यस महिलाको नाम मून रिबास हो …
यदी तपाई सुनचाँदी किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ जानीराखौ आजको भाउ!
माघ १८, २०७४ SG BigulMedia
काठमाडौँ, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको अनुसार आज बुधबार २ सय रुपैयाले बढेको सुनको मुल्य आज फेरी १ सय रुपैयाले बढेको छ । आज छापावाला सुनको मुल्य प्रतितोला ५७ हजार ३ सय रुपैयामा कारोबार भैरहेको छ। हिजो …